13 O wee guzo otu ebe n’elu ájá+ nke oké osimiri. M wee hụ otu anụ ọhịa+ nke si n’oké osimiri na-apụta,+ nke nwere mpi iri+ na isi asaa,+ okpueze iri dịkwa na mpi ya, ma aha nkwulu+ dị iche iche dịkwa n’isi ya. 2 Anụ ọhịa ahụ m hụrụ dịkwa ka agụ owuru,+ ma ụkwụ ya dị ka nke anụ ọhịa bea,+ ọnụ ya dịkwa ka ọnụ ọdụm.+ Dragọn+ ahụ wee nye anụ ọhịa ahụ ike ya na ocheeze ya na ikike dị ukwuu.+ 3 M wee hụ otu n’ime isi ya, dị ka à ga-asị na e gburu ya egbu, ma ahụ́ e merụrụ ya nke pụrụ igbu ya+ lara, ụwa niile wee jiri oké mmasị soro anụ ọhịa ahụ. 4 Ha wee fee dragọn ahụ ofufe n’ihi na o nyere anụ ọhịa ahụ ikike, ha fekwara anụ ọhịa ahụ ofufe, na-ekwu, sị: “Ònye dị ka anụ ọhịa ahụ, ònye pụkwara ibuso ya agha?” 5 E nyekwara ya ọnụ na-ekwu okwu mpako+ na okwu nkwulu,+ e nyekwara ya ikike ime ihe ruo ọnwa iri anọ na abụọ.+ 6 O wee meghee ọnụ ya, na-ekwulu+ Chineke, na-ekwulu aha ya na ebe obibi ya, na-ekwulu ọbụna ndị bi n’eluigwe.+ 7 E nyekwara ya ikike+ ibuso ndị nsọ agha na imeri ha,+ e nyekwara ya ikike ịchị ebo niile na ndị niile na asụsụ niile na mba niile. 8 Ndị niile bi n’elu ụwa ga-efekwa ya ofufe; ọ dịghị otu n’ime ha e dere aha ya n’akwụkwọ mpịakọta+ nke ndụ nke Nwa Atụrụ ahụ e gburu egbu,+ malite mgbe a tọrọ ntọala ụwa.+ 9 Ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere ntị, ya nụrụ.+ 10 Ọ bụrụ na onye ọ bụla bụ onye a ga-adọrọ n’agha, a ga-adọrọ ya n’agha.+ Ọ bụrụ na onye ọ bụla bụ onye a ga-eji mma agha gbuo, a ga-ejiriri mma agha gbuo ya.+ Ebe a ka a chọrọ ntachi obi+ na okwukwe+ n’aka ndị nsọ.+ 11 M wee hụ anụ ọhịa ọzọ+ nke si n’ala na-apụta,+ o nwere mpi abụọ ndị dị ka nke nwa atụrụ, ma ọ malitere ikwu okwu dị ka dragọn.+ 12 O ji ikike niile nke anụ ọhịa mbụ+ ahụ wee nọrọ n’ihu ya na-achị. Ọ na-emekwa ka ụwa na ndị bi n’ime ya na-efe anụ ọhịa mbụ ahụ ofufe, bụ́ nke ahụ́ e merụrụ ya nke pụrụ igbu ya lara.+ 13 Ọ na-emekwa ihe ịrịba ama ndị dị ukwuu,+ nke na ọ na-eme ọbụna ka ọkụ si n’eluigwe daa n’ụwa n’ihu ụmụ mmadụ. 14 Ọ na-eduhiekwa ndị bi n’ụwa, n’ihi ihe ịrịba ama ndị e nyere ya ikike ime n’ihu anụ ọhịa ahụ, ọ na-agwakwa ndị bi n’ụwa ka ha mee onyinyo+ nke dị ka anụ ọhịa ahụ e ji mma agha merụọ ahụ́,+ ma ya agbakee. 15 E nyekwara ya ikike ikunye onyinyo nke anụ ọhịa ahụ ume, ka onyinyo nke anụ ọhịa ahụ wee na-ekwu okwu ma na-eme ka e gbuo ndị niile na-agaghị efe onyinyo+ nke anụ ọhịa ahụ ofufe n’ụzọ ọ bụla. 16 Ọ na-amanyekwa mmadụ niile,+ ndị nta na ndị ukwu, ndị ọgaranya na ndị ogbenye, na ndị nweere onwe ha na ndị ohu, ka a kaa ha akara n’aka nri ha ma ọ bụ n’egedege ihu ha,+ 17 ka onye ọ bụla gharakwa inwe ike ịzụ ihe ma ọ bụ ire ihe ma e wezụga onye nwere akara ahụ, ya bụ, aha+ anụ ọhịa ahụ ma ọ bụ nọmba nke aha ya.+ 18 Ebe a ka a chọrọ amamihe: Ka onye nwere ọgụgụ isi gbakọọ nọmba nke anụ ọhịa ahụ, n’ihi na ọ bụ nọmba nke mmadụ;+ nọmba ya bụkwa narị isii na iri isii na isii.+